Sir Fudud Oo KA Dhigeysa Qof Leh Awoodda 40 Faras | Xaqiiqonews
Sir Fudud Oo KA Dhigeysa Qof Leh Awoodda 40 Faras
Marar badan ayaa waxa aad daremeysaa tabar yari, si fiican uma gudan kartid shaqooyinka ku horyaalla, kaliya waxaa kaa maqan waa furaha firfircoonida oo aad ku kua kasban karto kaliya in aad ogaato “Sirtan fudud”.
Xaqiiqonews waxa ay soo tarjumeysaa warbixin ay aqortay shabakadda “NDTV” oo qofka bareyso qaab fudud oo uu ku hanan karo firfircooni iyo awood dheeri ah.
shabakadda oo soo xiganeysa daraasad ay sameeyeen baarayaal ka tirsan jaamacadda(University of Central Queensland,) ayaa qortay in firfircoonida qofka iyo awoodiisa ay ku jirto in uu qofka ogaado faa,idada uu leeyahay jimicsiga.
Daraasadda oo lagu fuliyey 615 qof ayaa waxaa cilmi-baarayaasha ay ogaadeen in jimicsiga uu hoos u dhiggo cudurradda yareeya awoodda qofka sida sokorta, cudurada wadnaha iyo kansarka.
Squib oo ka tirsan baarayaasha ayaa Emil-ka oo ay u dirtay Reuters Health ku qortay “Dad badan oo ka tirsan Rer Australia Ma sameeyaan Jimicsi ku filan, kuwaasi waxaan ku leenahay in aad sameyso jimicsi jireed ayaa ka wanaagsan in aadan waxba sameynin, in aad kordhiso jimicsikaadana waxa ay faa,ido u tahay caafimaadkaada”